News Collection: सत्ता संघर्षका भित्री कुरा
सत्ता संघर्षका भित्री कुरा
हरि रोका - वर्तमान राजनीति गत्यावरोधको निकास के होला ? प्रधानमन्त्री को बन्ला ? संसद्बाट प्रधानमन्त्री छान्न नसकिरहेका अवस्थामा राष्ट्रपति रामवरण यादव विभिन्नखाले व्यवसायी, राजनीतिकर्मी, कानुनी व्यक्तित्व, कूटनीतिज्ञ तथा अन्य सुरक्षा निकायका व्यक्तिसँग सल्लाह लिनमा व्यस्त देखिन्छन् । के उनी त्यतिकै चुप लागेर बस्लान् ? धर्मका आडमा पूर्वराजा, युवराजयुवराज्ञीहरू मुठी खोलेर दानधर्म गर्न देशभरका मन्दिर धाइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूले नजानिँदो पारामा उनीहरूको मनोबल उठ्ने गरी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । धर्मका नाममा पूर्वराजाको धार्मिकयात्रामा भेला हुने गरेका हुक्के, चिलिमे र ढोँगी धर्मअवतारहरू 'राजा आऊ देश बचाऊ' को नारा घन्काउन थालेका छन् । के फेरि राजतन्त्र र्फकला ? शान्तिसुरक्षा धरापमा छ । आपराधिक क्रियाकलाप सुनियोजित र संगठित रूपमै हुन थालेका छन् तिनको नियन्त्रण कसरी र कसले गर्ला ? के यही कामचलाउ सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउला ? शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, सेना, आदिको भरणपोषणका लागि चाहिने तलबभत्ता आदिको व्यवस्थापनमा व्यवधान पर्‍यो भने के होला ? देशभर चलिरहेका प्रोजेक्ट बजेट अभावमा, निरीक्षण र नियमन अभावमा पूर्ण होलान् ? दलहरूको कहिल्यै नटुंगिने कचिंगलका कारण आउने जेठ १४ भित्र देशले संविधान पाउन सक्ला ?
जबाफको अपेक्षा नगरीकनै यस्ता थुप्रै प्रश्न सोध्ने गरिएका छन् ।
दलहरूका असंगतिपूर्ण क्रियाकलापले, बानी र व्यवहारमा तादात्म्य नदेखिएकाले कोहीकसैसँग पनि 'अब के हुन्छ' भन्ने प्रश्नको बनीबनाउ उत्तर छैन । दलहरू यति बिघ्न एकअर्काप्रति किन सशंकित छन् ? विश्वासको पोखरी किन यतिसारो धमिलो देखिएको हो ? आशंका सबैका मनमा उत्पन्न भइरहेको छ । केही अनिष्ट त हुने नै भयो तर के हुन्छ ? कसरी हुन्छ ? कहिले हुन्छ ? र कसले गर्ला ? यस्ता खुलदुली सबैका मनमा छ ।
स्याङजा बेलटारीमा दसैंको अवसर पारेर बुढापाका र युवाको जमघटमा यस्तै राजनीतिक गफगाफ चलिरहेका बेला पंक्तिकारले भाग लिने मौका पायो । छोटो चिनापर्चीपछि उल्लिखित प्रश्न दोहोरिए । आशंकाका रेखा कोरिए । चुपचाप बसेर पाका मानिसहरूको राजनीतिमाथिको टिप्पणी सुन्न आफ्नै खालको आनन्द आउँछ । 'नेपाल अजिब छ' एकजना पाका मानिसले लामो अर्थ लाग्ने कुरा भन्न भ्याए । 'चमत्कार भन्न मिल्ने गरी रातारात केही सहमति भइहाल्ने र कहिलेकाहीं वषौर् वर्ष केही नहुने अचम्मको देश हो यो' तिनले थपे ।
२००७ सालमा कांग्रेसले क्रान्ति गर्‍यो तैपनि उही राणा प्रधानमन्त्री भयो । एकपटक भागिसकेका राजालाई कांगे्रसले फर्काएर ल्यायो र राजगद्दी दिलाइदियो । त्यही राजाका छोराले प्रधानमन्त्री रहेका बीपीको सरकार भंग गरेर आठ वर्ष जेल कोचिदियो । हिजोसम्म कांग्रेसमा लागेर सत्ताको स्वाद पाएका मानिस लाजसरम नमानी रातारात बीपीको घररूपी कांग्रेस छोडेर तत्कालीन राजा महेन्द्रका घरमा डेरा सरे । २०४६ सालमा गणेशमानको नेतृत्वमा जनआन्दोलन भयो । उनले प्रधानमन्त्री पद प्राप्त भएर पनि खाएनन् तर जुन कांग्रेसलाई वषौर्को त्यागतपस्या र बलिदानी संघर्षमार्फत राज्यसत्ता दिलाएका थिए, कालान्तरमा उनले त्यही कांग्रेसमा बास पाएनन् । त्यत्रो जनयुद्ध गरेर पाखामा फालिएका किंमकर्तव्यविमूढ अवस्थामा रहेका दललाई सँगै लिएर आएको माओवादीलाई जनताले ठूलो पार्टी बनाइदिए तर अहिले अरू दलहरू मिलेर उसैलाई पाखा लगाउन खोजिरहेका छन् । अचम्म होइन त ? ती पाका मानिसले थपे । केहीले गह्रांै मन्टो हल्लाएर समर्थन गरे । केहीलाई पचाउन गाह्रो परेको पनि देखिन्थ्यो तर कसैले उनको कुराको प्रतीकार गरेनन् । स्पष्ट थियो मुलुकको राजनीति धमिलिएको देखेर मानिस चिन्तित थिए । अर्का एक अधबैंसेले सोधे यस्तै अनमेल र अस्थिरताको राजनीति नेपालमा मात्रै किन दोहोरिइरहन्छ ? उत्तर खोज्न हामी अलग्गियौँ र आआफ्ना गुँडतिर लाग्यौँ । साँझ रातमा परिवर्तन भइसकेको थियो ।
२००७, २०३६, २०४६, २०६२/६३ सालका महत्त्वपूर्ण संघर्षमा कहिले पछि लागेर, कहिले प्रत्यक्ष संलग्न भएर र कहिले टाढाबाट हेरेर अनुभूति सँगालेका बुढापाकाहरूको कमी छैन गाउँघरमा । ठूलाठूला दलका नेतरू सहमति खोज्न वार्ता गरिरहेका छन् तर आआफ्नो अड्डीमा उभिन्छन् र सहमतिको सट्टा विमतिमा पुग्छन् र उठ्छन् । राजनीतिमा गहिरो फाटो देखिएको छ । स्टेटम्यानसिप देखाउने कोही देखिँदैन । यसप्रकारको फाटो चौडा हुँदै गएमा भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो संकट बेहोर्नुपर्ने कुराले आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्य के हुने हो भन्ने गम्भीर सवाल खडा भएको छ । गाउँले दिक्क र दुःखी देखिएका छन् । स्थिरता, शान्ति र व्यवस्था नसुधि्रएको देखेर चिन्तित छन् । यद्यपि वर्गीय समाजमा सहमति र सम्झौताले शान्ति, स्थिरता र सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन भन्ने पनि तिनले नेपालको लामो राजनीतिक अभ्यासका दौरान भोग्दै आएका छन् । त्यसप्रति सचेत देखिन्छन् तर मलाई भने एक हिसाबले खुसी पनि लाग्यो । मानिस राजनीतिको गफ गरिरहेका छन् र आफ्नो गच्छेअनुसार राजनीतिक निकास के हुन सक्छ भनेर अहिलेको कोलाहलपूर्ण माहोलमा समेत निकास खोज्न तल्लीन छन् ।
सधैंको अन्योल र अस्थिरता, अलमल र आशंकाले संकट निम्त्याउँछ भन्ने कुरामा दोधार कसैमा नहुनुपर्ने हो तर पुराना दलहरू जानाजानी अलमल गरिरहेका छन् । परिवर्तनलाई नरोक्दा धेरै कुरा गुमाउनुपर्ने आशंका पालिरहेका दलहरू अनेक बहाना खोजिरहेका छन् । अलमल गराइरहेका छन् र असहमति र शान्तिसम्झौतै भंग हुने दिशातर्फ उन्मुख देखिएका छन् । तिनीहरूलाई लागेको छ अहिलेको शक्तिसन्तुलनमा माओवादी कमजोर छ । सैन्य, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, मिडिया तथा कार्यनीतिक कमजोरीका कारण माओवादीले प्राप्त गरिरहेको जनसमर्थनमा व्यापक कटौती भएको तिनले अड्कल काटेको देखिन्छ । सम्झौतामाथि सम्झौता गराएर, एकमाथि अर्को खोँचे थापेर उनीहरू माओवादीलाई गलाउन चाहन्छन् । जनताका पक्षमा हुनैपर्ने, कार्यान्वयन गराउनैपर्ने प्रत्येक मुद्दालाई छोडाउन चाहन्छन् र आफूजस्तै एजेन्डाविहीन यथास्थितिवादको आहालमा चुल्र्लुम्म डुबाउन चाहन्छन् । जति ढिला हुदै जान्छ क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरूको गतिशीलता, आवेग र आक्रोश मत्थर हुदै जान्छ । विगतजस्तै सांसारिक जीवनमा डुब्न थालेपछिको जिन्दगी कस्तो हुन्छ तिनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ किनकि उनीहरूको आफ्नो विगत सांसारिक जीवनमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिका आवेगपूर्ण क्षेणहरूमा आएका परिवर्तनको अनुभव उनीहरूसँग प्रयाप्त छन् । नेताकार्यकर्ताहरू एकपटक सत्तासुविधा भोग गरेपछि कसरी सुस्ताउँछन्, कसरी खतरा मोल्न हिच्किचाउँछन् भन्ने उनीहरूका आफ्नै अनुभव छन् ।
परिवर्तन नहँदा सबैखाले संकटको मार अहिलेको संसारमा गरिब, दीनदुःखीले खेप्नुपर्ने हुन्छ जो कसैबाट लुकेको छैन । राज्यको उपयुक्त पुनसर्रचना नहुँदा धनीमानी र राज्यको दोहन गरेर ज्यान पालिरहेकालाई केही फरक पर्दैन । शासकीय प्रणालीगत ढाँचामा परिवर्तन नखोजिँदा, सामाजिक न्याय र समानताका लागि सम्पत्तिको वितरण र पुनर्वितरण नहँदा कांग्रेस र एमालेलाई केही फरक पर्दैन किनकि उनीहरूले काखी च्यापेको वर्गले परिवर्तन हुँदा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक हिसाबले केही गुमाउनुपर्ने निश्चित हुन्छ । त्यसैले उनीहरू मौकाको ताकमा छन् परिवर्तनलाई सखाप पार्न । प्रधानमन्त्री निर्वाचनको रोटेपिङमा कांग्रेस मच्चिरहनु र एमालेले भोट नखसालेर राष्ट्रिय सहमतिको धुन गुन्जाइरहनुमा पक्कै नयाँ खिचडी पकाउन खोजिँदै छ भनेर माओवादीका शीर्ष नेताहरूले बुझ्न नसक्नु आफंैमा आश्चर्य लाग्ने विषय हो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई विराजमान गराउन सहमति खोजिरहेका छन् तर बिस्तारैबिस्तारै जनवर्गीय संगठनमा समेत पकड गुमाउँदै गएका उनलाई माधव नेपाल र केपी ओलीले ज्यान गए प्रधानमन्त्री हुन नदिन कम्मर कसेर लागेका छन् । यी कुरा माधव र ओलीका प्रत्येक भाषणमा दोहोरिने गरेका छन् । झलनाथले बुझ्न नखोज्नु अर्कै कुरा हो । एमाले केन्द्रीय कमिटीले कांग्रेसलाई भोट हाल्ने निर्णय गर्‍यो भने झलनाथ त्यही समाचार सुनाउन नयाँ बजारस्थित प्रचण्ड निवासमा पुग्नेछन् । उनले भन्नेछन् कामरेड केही लागेन, हामी त कांग्रेसमा समाहित भयौँ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि तपाईंहरू पनि सामेल हुनुहोस् । साउन लागेपछि वषर्ा हुन्छ भन्ने सत्यजस्तै तटस्थताको राग अलापेर बसिरहेका मधेसी दलहरूले तत्काल कांग्रेसलाई भोट हाल्ने निर्णय सुनाउनेछन् र अहिलेको यो लामो नाटकको पहिलो पारी समाप्त हुनेछ । वस्तुतः अनमिनको म्याद नगुजारुन्जेल र अनमिन नफर्किउन्जेल भोट हाल्ने त्यस्तो नौवत नआउला । शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजन हुन नदिन र ओसीएचएचआर हटाएपछि आइलाग्ने परिस्थितिको मुकाबला गर्न चाहिने बलियो सरकार त्यसपछि मात्र बन्न सक्छ भन्ने अड्कल काट्न गाह्रो छैन ।
तैपनि माओवादी नेताहरू आपसी खिचलोमा किन अल्भिरहेका छन् बुझि नसक्नु छ ।
दलहरू किन मिल्न सकिरहेका छैनन् ? सेना समायोजनको सूत्र लगभग तयार भइसकेको छ । पीएलएको संख्या, नाम, ठेगाना, सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । वाईसीएलको तथाकथित ब्यारेकीकरण तत्काल भंग गर्ने बताइसकिएको छ । तैपनि माओवादीलाई अछुत राख्नैपर्ने प्रयत्न किन भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटै छ, त्यो हो सहभागितामूलक, संघीय, सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने, स्वाभिमानयुक्त राष्ट्रिय राज्य बन्न प्रेरित गर्ने संविधान बन्न नदिनका लागि । यो अस्वाभाविक होइन । नेपाली राज्य गणतन्त्र सँगसँगै वर्गीय राजनीतिमा घनीभूत रूपमा प्रवेश गरिसकेको छ । वर्गीय स्वार्थमा आआपना अडान दोहोरिनु कुनै नौलो होइन, हँदैन । वार्ता र छलफलमा देखिने असहमति र अडानलाई आफ्नो हकमा निर्णय गराउन राज्यले हिंसात्मक रूप लिने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । विश्व इतिहासहरूलाई केलाउँदा देखिने परिदृश्यमा वर्गसंघर्ष सबै संघर्षहरूभन्दा निर्मम हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ । नपत्याउँदो भेषमा निम्तिने त्यस्ता संघर्षका लागि माओवादी तयार छ छैन ? दसैंको छुट्टीमा तिनका नेताले गम्भीरतापूर्वक सोचून् ।